Summer Free For All 2019 Guide - Burmese by Portland Parks & Recreation - Issuu
မပမာက်ဖက် အမေှ့မပမာက်ဖက် အမေှ့ဖက် (EAST) အမေှ့မတာင်ဖက် (SOUTHEAST) အမနာက်ဖက် (WEST)
Columbia Park N Woolsey Avenue နှင Winchell Street
ဇွန် 17 ေက်–ကသဂုတ် 21 ေက်
မွန်းတည့် 12 နာေီ - မွန်းလွဲ 1 နာေီ
4၊ 35၊ 44၊ 75
Dawson Park N Stanton Street နှင Vancouver Avenue
Kenton Park N Delaware Avenue နှင Kilpatrick Street
McCoy Park N Newman Avenue နှင Newark Street
4၊ 6၊ 44
Alberta Park NE 19th Avenue နှင Jarrett Street
8၊ 17၊ 72
မွန်းတည့် 12:30 နာေီ - မွန်းလွဲ 1:30 နာေီ
71၊ 72၊ 75
Montavilla Park NE 82nd Avenue နှင Glisan Street
ဇွန် 17ေက်–ကသဂုတ် 21 ေက်
Wellington Park NE 66th Avenue နှင Mason Street
Woodlawn Park NE 13th Avenue နှင Dekum Street
နံနက် 11:30 နာေီ - မွန်းတည့် 12:00 နာေီ
6၊ 8၊ 75
ဇွန် 18 ေက်–ကသဂုတ် 23 ေက်
နံနက် 11:00 နာေီ - နံနက် 11:45 နာေီ
Glenfair Park NE 154th Avenue နှင Couch Street
ဇွန် 17 ေက်–ကသဂုတ် 30 ေက်
20၊ 25၊ 74၊ 77၊
Lents Park SE 92nd Avenue နှင Steele Street
10၊ 17၊ 72၊
Lincoln Park SE 135th Avenue နှင Mill Street
ဇွန် 24 ေက်–ကသဂုတ် 23 ေက်
မွန်းလွဲ 12:30 နာေီ - မွန်းလွဲ 1 နာေီ
Luuwit View Park NE 127th နှင Fremont Street
21၊ 22၊ 73
Parklane Park SE Main Street နှင Millmain Drive
Raymond Park SE 118th Avenue နှင Liebe Street
မွန်းတည့် 12 နာေီ - မွန်းလွဲ 12:30 နာေီ
Ventura Park SE 113th Avenue နှင Stark Street
Wilkes Park NE 154th Avenue နှင Beech Street
Creston Park SE 43rd Avenue နှင Rhone Street
9၊ 17၊ 66
Essex Park SE 76th Avenue နှင Center Street
9၊ 17၊ 72
Harrison Park SE 84th Avenue နှင Harrison Street
Mt. Scott Park SE 72nd Avenue နှင Ramona Street
10၊ 14၊ 72
မိုဘိုင်းကစားြွဲ + မန့လယ်စာများ
ဇွန်လ 17 ေက်–ကသဂုတ်လ 30 ေက် တနင်္လာမန့၊ ဗုဒ္ဓဟူးမန့ နံနက် 10 နာေီ - မွန်းလွဲ 1 နာေီ
ဇွန်လ 17 ေက်–ကသဂုတ်လ 30 ေက် အင်္လါမန့၊ မသာကကာမန့ နံနက် 10 နာေီ - မွန်းလွဲ 1 နာေီ
နံနက် 11:30 နာေီ - မွန်းလွဲ 12:30 နာေီ
ဇွန်လ 17 ေက်–ကသဂုတ်လ 30 ေက် အင်္လါမန့၊ မသာကကာမန့ မွန်းလွဲ2နာေီ - ညမန5နာေီ
မွန်းလွဲ 2:30 နာေီ - မွန်းလွဲ 3:30 နာေီ
20၊ 25၊ 73၊
ဇွန်လ 17 ေက်–ကသဂုတ်လ 30 ေက် ဗုဒ္ဓဟူးမန့၊ မသာကကာမန့ မွန်းလွဲ2နာေီ - ညမန5နာေီ
Gilbert Heights Park SE 130th Avenue နှင Cora Street
ဇွန်လ 17 ေက်–ကသဂုတ်လ 30 ေက် တနင်္လာမန့၊ မွန်းလွဲ2နာေီ - ညမန5နာေီ ကကာသြမတးမန့၊ နံနက် 10 နာေီ - မွန်းလွဲ 1 နာေီ
မွန်းလွဲ 2:30 နာေီ - မွန်းလွဲ 3:30 နာေီ နံနက် 11:30 နာေီ - မွန်းလွဲ 12:30 နာေီ
ဇွန်လ 17 ေက်–ကသဂုတ်လ9ေက်
မွန်းတည့် 12 နာေီ
ဇွန်လ 17 ေက်–ကသဂုတ်လ 16 ေက်
10၊ 14၊ 17၊ 71
17၊ 70၊ 75
ဇွန်လ 24 ေက်–ကသဂုတ်လ 16 ေက်
9၊ 10၊ 17
ဇွန်လ 24 ေက်–ကသဂုတ်လ 23 ေက်
မွန်းလွဲ 12:30 နာေီ
တနင်္လမနွ မကျာင်းတွင်းမန့လယ်စာများ (SUN SCHOOL LUNCHES)
Mill Park SE 117th Avenue နှင Mill Court
ADA ACCESSIBLE—လူတစ်ဦးချင်းစီက လမ်းခင်းထားသည့် လမ်းများကို အသုံးပြုပြီး နယ်မပမထဲသို့ ဝင်မောက်ပခင်းနှင့် ထွက်ပခင်း ပြုလုြ်နိုင်သည်။ TRIMET MAX မီးလင်းမသာလက်ေန်းများ ဝန်မောင်မှုလိုင်း
ေက်စွဲများ နှင့် အချိန်များ
စမနမန့၊ ဇွန်လ 22 ေက်၊ ညမန6နာေီ - ည 8:30 နာေီ
Romeo & Juliet ေှိတ်ခ်စြီးယား မူေင်းမလ့ကျင့်မေးြွဲမတာ် (Original Practice Shakespeare Festival) မှတင်ေက်သည်
စမနမန့၊ ဇွန်လ 29 ေက်၊ မွန်းတည့် 12 နာေီ -ညမန4နာေီ
Peace in the park—ဂီတ၊ ဟာသနှင့် မု့န်ေိုင်များပဖင့် မိသားစု မြျာ်ြွဲေွှင်ြွဲ
တနင်္လမနွမန့၊ ဇွန်လ 30 ေက်၊ မွန်းတည့် 12 နာေီ - မွန်းလွဲ3နာေီ
Picnic in the park—ြူမဖာင်းမဘာလုံးကန်ြွဲ၊ DJ၊ မုန့်ေိုင်များနှင့် တပခားအောများ
စမနမန့၊ ဇူလိုင်လ 13 ေက်၊ မွန်းလွဲ2နာေီ - ညမန4နာေီ
People of the Drum—Portland Taiko၊ Mexica Tiahui၊ Painted Sky နှင့် Alex Addy တို့က သီေိုမဖျာ်မပဖသည်
ကကာသြမတးမန့၊ ဇူလိုင်လ 18 ေက်,ညမန6နာေီ–ည 8 နာေီ
Dina Y Los Rumberos—ကျူးဘားနှင့် နိုင်ငံတကာဂီတတို့ ြါဝင်မဖျာ်မပဖထားသည့် ကာေစ်ဘီယံ အေသာ
စမနမန့၊ ဇူလိုင်လ 20 ေက်၊ ညမန6နာေီ–ည 8 နာေီ
Salsa in the Plaza with Son Latino—ညမန6နာေီ မဖျာ်မပဖမှု၊ ညမန 6:30 နာေီ သင်ခန်းစာများနှင့် အသင်းအဖွဲ့အက
မသာကကာမန့၊ ဇူလိုင်လ 26 ေက်၊ ညမန 6:30 နာေီ၊ မနဝင်ချိန်တွင်စတင်သည့် ရုြ်ေှင်
တနင်္လမနွမန့၊ ဇူလိုင်လ 28 ေက်၊ မွန်းတည့် 12 နာေီ - မွန်းလွဲ3နာေီ
ကကာသြမတးမန့၊ ကသဂုတ်လ 15 ေက်၊ ညမန6နာေီ - ည 8 နာေီ
World Beat Collective—အာဖေိက၊ လက်တင်အမမေိကနှင့် ကာေစ်ဘီယံ ဂီတတို့ကို မောမနှာမြါင်းစြ်တင်ေက်ပခင်း
စမနမန့၊ ကသဂုတ်လ 17 ေက်၊ မွန်းတည့် 12 နာေီ၊ မနဝင်ချိန်တွင်စတင်သည့် ရုြ်ေှင်
စမနမန့၊ ကသဂုတ်လ 24 ေက်၊ နံနက် 10 နာေီ - မွန်းလွဲ2နာေီ
တနင်္လမနွမန့၊ ကသဂုတ်လ 25 ေက်၊ မွန်းတည့် 12 နာေီ - မွန်းလွဲ3နာေီ
Picnic in the Park —ြူမဖာင်းမဘာလုံးကန်ြွဲ၊ DJ၊ မုန့်ေိုင်များနှင့် တပခားအောများ
တနင်္လမနွမန့၊ စက်တင်ဘာလ 1 ေက်၊ နံနက် 10 နာေီ၊ မနဝင်ချိန်တွင်စတင်သည့် ရုြ်ေှင်
11th Annual Slavic Festival “အမမွအနှစ် (Heritage)” Pawn Sacrifice (2014) PG-13
တနင်္လာမန့၊ မွန်းလွဲ 1:00 နာေီ – မွန်းလွဲ 4:00 နာေီ
Creston Pool၊ 4454 SE Powell Blvd
အင်္လါမန့၊ မွန်းလွဲ 1:00 နာေီ – မွန်းလွဲ 2:30 နာေီ
Montavilla Pool၊ 8219 NE Glisan Street
ဗုဒ္ဓဟူးမန့၊ မွန်းလွဲ 1:15 နာေီ – မွန်းလွဲ 3:00 နာေီ
Grant Pool၊ 2300 NE 33rd Avenue
ဗုဒ္ဓဟူးမန့၊ မွန်းလွဲ 2:00 နာေီ - မွန်းလွဲ 3:45 နာေီ
Columbia Pool၊ 7701 N Chautauqua Blvd
ဗုဒ္ဓဟူးမန့၊ ည 7:30 နာေီ – ည 8:50 နာေီ
Sellwood Pool၊ 7951 SE 7th Avenue
ကကာသြမတးမန့၊ မွန်းလွဲ 1:05 နာေီ – မွန်းလွဲ 2:55 နာေီ
Peninsula Pool၊ 700 N Rosa Parks Way
မသာကကာမန့၊ မွန်းလွဲ 1:45 နာေီ – မွန်းလွဲ 4:30 နာေီ
Pier Pool၊ 9341 N St. Johns Avenue
မသာကကာမန့၊ ဇွန်လ 21 ေက်
King School Park၊ NE Grand Avenue နှင Going Street
မသာကကာမန့၊ ဇူလိုင်5ေက်
Brooklyn Park၊ SE Milwaukie Avenue နှင Haig Street
စမနမန့၊ ဇူလိုင်လ6ေက်
Floyd Light Park၊ SE 111th Avenue နှင Alder Street
9၊ 10၊ 17၊ 75
ကကာသြမတးမန့၊ ဇူလိုင်လ 11 ေက်
Khunamokwst Park၊ 5200 NE Alberta Street
70၊ 72၊ 75
1၊ 54၊ 56
Ache Son—လက်တင်ဘာသာစကား Solo- A Star Wars Story (2018) PG-13—စြိန်စာတန်းနှင့်
အင်္လလိြ်စကားမပြာ Fernhill Park၊ NE 37th Avenue နှင Ainsworth Street မသာကကာမန့၊ ဇူလိုင် 12 ေက် Colonel Summers Park၊ SE 17th Avenue နှင Taylor Street
Yankee Gaucho—ရိုးရာ ဂီတ
4၊ 24၊ 44
• ဇူလိုင် • ဇူလိုင်
စမနမန့၊ ဇူလိုင်လ 13 ေက်
Pendleton Park၊ SW 55th Drive နှင Iowa Street
တနင်္လမနွမန့၊ ဇူလိုင်လ 14 ေက်
Warner Pacific University၊ 2219 SE 68th Avenue
တနင်္လာမန့၊ ဇူလိုင်လ 15 ေက်
Smurfs: The Lost Village (2017) PG—အင်္လလိြ်စာတန်းနှင့်
Sellwood Park၊ SE 7th Avenue နှင Bidwell Street Lovejoy Fountain Park၊ SW 3rd Avenue နှင Harrison Street
ကကာသြမတးမန့၊ ဇူလိုင်လ 18 ေက်
The Sirens of Blues—ဘလူးစ် Tara Velarde—လူထု Black Panther (2018) PG-13—စြိန်စာတန်းနှင့် အင်္လလိြ်စကားမပြာ Hula Halau ‘Ohana Holo’oko’a Band—ဟာဝိုင်အီရိုးော Hotel Transylvania 3- Summer Vacation (2018) PG Quadraphonnes—ဂျက်ဇ်နှင့် ဖန့်ခ် ဂီတ Aquaman (2018) PG-13 Rae Gordon Band—ဘလူးစ်နှင့် ေိုးလ် ဂီတ Wamba—အက်ဖရိုဘိ ဂီတ POPgoji—လက်တင်ဘာသာစကား
Harrison Park၊ SE 84th Avenue နှင Harrison Street
Georgina Band—အေရွ့အလယ္ပိုင္း ဂီတ
Mel Brown B-3 Organ Group—ဂျက်ဇ်၊ ဘလူးစ်နှင့် ေိုးလ် ဂီတများ
Fernhill Park၊ NE 37th Avenue နှင Ainsworth Street မသာကကာမန့၊ ဇူလိုင် 19 ေက်
Brentwood Park၊ 6550 SE 60th Avenue
စမနမန့၊ ဇူလိုင်လ 20 ေက်
North Park Blocks၊ NW 8th Avenue နှင Everett Street
တနင်္လာမန့၊ ဇူလိုင်လ 22 ေက်
ကကာသြမတးမန့၊ ဇူလိုင်လ 25 ေက် McCoy Park၊ N Trenton Street နှင Newman Avenue
Fernhill Park၊ NE 37th Avenue နှင Ainsworth Street မသာကကာမန့၊ ဇူလိုင် 26 ေက်
ညမန6နာေီ စမနမန့၊ ဇူလိုင်လ 27 ေက်
Soul Progression—မြါ့ြ်၊ မော့ခ်နှင့် ဘလူးစ် ဂီတ Ready Player One (2018) PG-13 Choro da Alegria—ေမ်ဘာ ဂီတ
1၊ 4၊ 8၊ 15၊ 17၊ 20၊ 35၊ 44၊ Pearl District Neighborhood Association
51၊ 54၊ 56၊ 77၊
Grupo Masato—အက်ဖရို-ြီရူးဗီးယန် အက
Outer Orbit—ဖန့်ခ်နှင့် ေိုးလ် ဂီတ
Rhythm Culture—ဘလူးစ်၊ ဂျက်ဇ်၊ ေက်မဂး ဂီတ
1၊ 8၊ 9၊ 12၊ 17၊ 35၊ 36၊ 38၊ 43၊ 44၊ 45၊ 54၊ 55၊ 56၊ 92၊ 94၊ 99၊ New Columbia Campus Partners
Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) PG—စြိန်စာတန်းနှင့်
Portland Festival Symphony (မကကးတူေိယာ)၊ ဂီတဒါရိုက်တာ Gregory
4၊ 11၊ 16
Nemo Hádéést’į́į́/Finding Nemo (2003) G—အင်္လလိြ်စာတန်းနှင့်
Portland Festival Symphony (ကကိုးတြ်တူေိယာများ)၊ ဂီတဒါရိုက်တာ
70၊ 75၊ 77
Incredibles2(2018) PG Bloco Alegria—ေမ်ဘာ အက
Turquoise Pride—အမမေိကန် တိုင်းေင်းသား စည်မပဗာတီးသံ Cully Park၊ NE 72nd Avenue နှင Killingsworth Street
Grant Park၊ NE 33rd Avenue နှင Brazee Street, ညမန6နာေီ
Wellington Park၊ NE 66th Avenue နှင Skidmore Street တနင်္လာမန့၊ ဇူလိုင်လ 29 ေက်
43၊ 44၊ 45၊ 54၊ 55၊ 56၊ 92၊
Tony Starlight—ေပါ့ပ္ ဂီတ
တနင်္လမနွမန့၊ ဇူလိုင်လ 28 ေက်
အင်္လလိြ်စကားမပြာ Cathedral Park၊ N Crawford Street နှင Pittsburg Avenue,
70၊ 99 1၊ 8၊ 9၊ 12၊ 17၊ 35၊ 36၊ 38၊
Geno Michaels Band—ဖန့်ခ် ဂီတ Denorval Unthank Park၊ 510 N Shaver Street
Approved For Adoption (2012) NR—အင်္လလိြ်စာတန်းနှင့်
9၊ 10၊ 17၊ 19၊ 70၊
Moody Little Sister—အမမေိကန်ပြည်မထာင်စုနှင့် ြတ်သက်မသာ
Dawson Park၊ 2926 N Williams Avenue
The Old Yellers—ဘလူးဂရက္စ္
Sellwood Park၊ SE 7th Avenue နှင Bidwell Street
6၊ 8၊ 44၊ 72
ဗုဒ္ဓဟူးမန့၊ ဇူလိုင်လ 10 ေက်
တနင်္လာမန့၊ ဇူလိုင်လ 8 ေက်
Kenilworth Park၊ SE 32nd Avenue နှင Holgate Boulevard
တနင်္လမနွမန့၊ ဇူလိုင်လ7ေက်
မဖျာ်မပဖြွဲများ နှင့် ရုြ်ေှင်များ
Big Bad Beat—မြါ့ြ် ဂီတ E.T. the Extra-Terrestrial (1982) PG Miller & Sasser—မကျးလက်ဂီတ
ကကာသြမတးမန့၊ ကသဂုတ်လ 1 ေက်
Washington Park Summer Festival—ညမန6နာေီ Rose Garden Amphitheater၊ 410 SW Kingston Avenue
မသာကကာမန့၊ ကသဂုတ်လ2ေက်
Village Square Parking Lot၊ SE 162nd Avenue နှင Stark Street Washington Park Summer Festival—ညမန6နာေီ Rose Garden Amphitheater၊ 410 SW Kingston Avenue
စမနမန့၊ ကသဂုတ်လ3ေက်
20၊ 25၊ 74၊
Painted Sky Northeast Native Dance Company နွင့္ Evening Star Painted Ponies—အမမေိကန်တိုင်းေင်းသား အက The Libertine Belles—ပမူးပမူးကကွကကွဂျက်ဇ်ဂီတ Moana (2016) PG
Opera in the Park—Viva Verdi! Giuseppe Verdi’s ၏ အမကာင်းေုံးလက်ောများ
အင်္လါမန့၊ ကသဂုတ်လ6ေက်
McCoy Park၊ N Trenton Street နှင Newman Avenue
Farnell Newton & The Othership Connection—ဖန့်ခ်နှင့် ေိုးလ် ဂီတ
Wellington Park၊ NE 66th Avenue နှင Skidmore Street
Chervona—အမေှ့ဥမောြ လူထု၊ ဖန့်ခ်၊ အက
15၊ 20၊ 75
24၊ 70၊ 75
JT Trawick’s Big Ozark Swing Orchestra—ပမူးပမူးကကွကကွဂျက်ဇ် ဂီတ
22၊ 23၊ 24၊ 77၊ 87၊
19၊ 20၊ 72၊ 272၊
ကကာသြမတးမန့၊ ကသဂုတ်လ 8 ေက်
Woodlawn Park၊ NE 11th Avenue နှင Oneonta Street
Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) PG—စြိန်စာတန်းနှင့် အင်္လလိြ်စကားမပြာ
Laurelhurst Park၊ SE 37th Avenue နှင Oak Street, ည မန6နာေ
Portland Festival Symphony (သံစုံတီးဝိုင်းအပြည့်)၊ ဂီတဒါရိုက်တာ Gregory Vajda
FESTIVAL LATINO—စတင်ချိန် မွန်းလွဲ4နာေီ Cully Park၊ NE 72nd Avenue နှင Killingsworth Street
Wilshire Park၊ NE 33rd Avenue နှင Skidmore Street Wellington Park၊ NE 66th Avenue နှင Skidmore Street Laurelhurst Park၊ SE 37th Avenue နှင Oak Street
Orquestra Pacifico Tropical—မတာင်အမမေိက ကမ်ဘီယာ Incredibles2(2018) PG—အင်္လလိြ်စာတန်းနှင့် စြိန်စကားမပြာ Portland Festival Symphony (သံစုံတီးဝိုင်းအပြည့်)၊ ဂီတဒါရိုက်တာ Gregory Vajda5Grand—ဖန့်ခ်နှင့် ေိုးလ် ဂီတ
DJ Prashant & Jai Ho! Dance Troupe—အက Slumdog Millionaire (2008) PG
မသာကကာမန့၊ ကသဂုတ်လ 16 ေက်
ကသဂုတ် • ကသဂုတ် • ကသဂုတ် • စက်တင်ဘာ
Mz. Etta’s World တင္ဆက္သည့္ Arietta Ward—ေိုးလ်၊ ဖန့်ခ်နှင့် အာရ္ အန္ဒ္ ဘီ Captain Marvel (2019) PG-13
စမနမန့၊ ကသဂုတ်လ 17 ေက်
Gateway Discovery Park၊ NE 106th Avenue နှင Halsey Street, စတင်ချိန် မွန်းလွဲ 12 နာေီ
တနင်္လမနွ၊ ကသဂုတ်လ 18 ေက်
Hamilton Park၊ SW 47th Drive နှင 44th Avenue
ကကာသြမတးမန့၊ ကသဂုတ်လ 15 ေက်
FunkTown PDX—ဖန့်ခ် ဂီတ
Peninsula Park၊ 700 N Rosa Parks Way, ညမန6နာေ တနင်္လမနွ၊ ကသဂုတ်လ 11 ေက်
Ventura Park၊ 460 SE 113th Avenue
• စမနမန့၊ ကသဂုတ်လ 10 ေက်
Saeeda Wright—ေိုလ်း၊ ဂျက်ဇ် ဂီတ နှင့် မဂါ့စ်ြဲလ်
Black Panther (2018) PG-13—စြိန်စာတန်းနှင့် အင်္လလိြ်စကားမပြာ
တနင်္လမနွ၊ ကသဂုတ်လ4ေက်
Friends of Noise Youth Showcase—ဟစ်မဟာ့ြ် ဂီတ
Portland Cello Project မဖျာ်မပဖသူ Radiohead၊ Coltrane၊ နှင့် Bach— ချိမ်ဘာ မြါ့ြ် ဂီတ
မသာကကာမန့၊ ကသဂုတ်လ9ေက်
PDX Jazz ဂီတလက်မောင် Mike Phillips အထူးဧည့်သည် Saeeda Wright၊ King Louie နှင့် LaRhonda Steele—ဂျက်ဇ် ဂီတ
Spring Garden Park၊ 3332 SW Spring Garden Street
ကကာသြမတးမန့၊ ကသဂုတ်လ 22 ေက်
Wellington Park၊ NE 66th Avenue နှင Skidmore Street Elizabeth Caruthers Park၊ SW Gaines Street နှင Bonds Avenue
မသာကကာမန့၊ ကသဂုတ်လ 23 ေက်
Luuwit View Park၊ NE 127th Avenue နှင Fremont Street
စမနမန့၊ ကသဂုတ်လ 24 ေက်
April Hill Park၊ SW 58th Avenue နှင Miles Street
တနင်္လမနွ၊ ကသဂုတ်လ 25 ေက်
Laurelhurst Park၊ SE 37th Avenue နှင Oak Street, 6PM
မသာကကာမန့၊ ကသဂုတ်လ 30 ေက်
Montavilla Park၊ 8219 NE Glisan Street
စမနမန့၊ ကသဂုတ်လ 31 ေက်
Overlook Park၊ N Interstate Avenue နှင Fremont Street
တနင်္လမနွမန့၊ စက်တင်ဘာလ 1 ေက်
Gateway Discovery Park၊ NE 106th Avenue နှင Halsey Street, စတင်ချိန် မွန်းလွဲ 10 နာေီ
Tonga Day 2019 Bumblebee (2018) PG-13 The Sportin’ Lifers—ဘလူးစ်၊ အာရ္ အန္ဒ္ ဘီ၊ ေိုးလ်နှင့် ဂျက်ဇ် ဂီတ Incredibles2(2018) PG Glass of Hearts—Blondie အမွတ္တရ ဂီတအဖွဲ့၊ မြါ့ြ်ဂီတ The Mars Rovers—မော့ခ်နှင့် ဘလူးစ်ဂီတ Up (2009) PG St. James’s Gate—ေဲလ်တစ် Mary Poppins Returns (2018) PG Rogue Bluegrass Band—ဘလူးဂေက်စ်နှင့် အမမေိကားနား Missing Link (2019) PG Providence Stage Band—ပမူးပမူးကကွကကွဂျက်ဇ် Mo Phillips and The Grumpies—ကမလးဂီတ Dumbo (2019) PG Sakumuna—ဖန့်ခ်နှင့် ေက်မဂး ဂီတ
Moana (2016) PG 11 ကကိမ်မပမာက် နှစ်ြတ်လည် ေလာဗစ်ြွဲမတာ် “အမမွအနှစ် (Heritage)”
ေနိုင်သည်—တပခားနည်းလမ်းပဖင့် မဖာ်ပြထားပခင်းမေှိသမေွ ့၊ လူတိုင်းသည် နယ်မပမတွင်းသို့ ဝင်မောက်ပခင်းနှင့် ထွက်ခွာပခင်းပြုလုြ်ပြီး လမ်းခင်းထားမသာ လူသွားလမ်းများမှ ြွဲများကို မြျာ်ေွှင်ခံစားနိုင်ြါသည်။
ကွန်ပမူနတီြွဲပဖင့် ြူးတွဲကျင်းြသည်—အချိန်ဇယား အြ်ဒိတ်များအတွက် portlandoregon.gov/parks/sffa ကို ဝင်ကကည့်ြါ။ အင်္လလိြ်ဘာသာစကားမဟုတ်မသာ ရုြ်ေှင်—အင်္လလိြ်စာတန်းနှင့်အတူ စက်ဘီးေြ်နားပခင်းအား ြွဲအတွင်း ေနိုင်ြါသည်။ စာတန်းထည့်ပခင်း—မနာက်ေက်တွဲ စာတန်းထည့်ပခင်း မတာင်းေိုေန်၊ ရုြ်ေှင်ပြမည့်ေက်မတိုင်ခင် အနည်းေုံး သုံး (3) ေက်အတွင်း 503-823-5059 ကို ဖုန်းမခါ်ေိုြါ။ အခမဲ့ ကကိုြို့ယာဉ် Washington Park စိတ်ဝင်စားဖွယ်မနောများကို လှည့်ြတ်ပြမြးသည်။ TRIMET MAX မီးလင်းမသာလက်ေန်းများ ဝန်မောင်မှုလိုင်း အေက်ြါမသာ အမဖျာ်ယမကာများ တစ်ဦးချင်း မသာက်သုံးမှုအား ဂီတမဖျာ်မပဖြွဲများနှင့် ရုြ်ေှင်ပြစဉ်တွင်သာ ခွင့်ပြုသည်။ မခွးအားလုံး ကို လည်သိုင်းကကိုးချည်ထားေမည်။ ြန်းပခံအားလုံးနှင့် သဘာဝ မနောများသည်မေးလိြ်နှင့် မေးေွ က်ကကီးထုတ်ကုန်များ ကင်းမဲ့ဇုန်ပဖစ်ြါသည်။
Summer Free For All 2019 Guide - Burmese
ေပါလ့ န္ ပန္းျခံမ်ားရွ ရိ ာခ်ေီ သာ အခမဲ့ ေႏြရာသီ ေပ်ာ္ပြရဲ ႊင္ပြ အဲ စီအစဥ္မ်ား။